Rwizi Thames: hunhu, mavambo, mhuka uye kusvibiswa | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 26/03/2021 15:57 | Geology
Nekuti England haina zororo rakadudzwa haina nzizi zhinji. Rwizi chete rune nzvimbo yakakura yeiyi Rwizi rweThames. Iyo ndeimwe yeakakurumbira pasirese uye iri basa rekuparadzanisa London kuita zvikamu zviviri. Uye zvakare, ndiyo sosi huru yekuwanisa mvura munyika.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese hunhu, mabviro, geology uye kukosha kwerwizi Thames.
2 Kunobva rwizi Thames
3 Thames rwizi fauna
4 Kusvibisa uye kukanganisa
Ndiyo rwizi rukuru uye rune simba muEngland runoyerera kuNorth Sea uye rwunobatanidza guta guru rechitsuwa ichi, London, neNorth Sea. Kuva chitsuwa, kureba kwezuva hakuna kufananidzwa neiko kwenzizi dzemakondinendi, asi hwakaenzana pakureba nedzimwe nzizi muEurope. Semuenzaniso, ine chiwedzero chakafanana neicho cheSegura rwizi kuSpain. Kwayakabva kunobva pakuungana kwenzizi ina: rwizi Churn, rwizi Coln, rwizi Isis (inozivikanwawo seWindrush Rwizi), uye Rwizi rweLeach.
Kwakatangira rwizi Thames kunobva kuPleistocene epoch, ndosaka ichinzi rwizi rudiki. Panguva iyoyo yaiyerera mukutanga kwayo kubva kuWales kuenda kuClacton-on-sea. Mukati merwendo rwayo rwose rwakayambuka Gungwa rese rekuchamhembe kuti rive rukova rweRwizi Rhine. Panguva iyoyo yaive imwe yenzira dzakakosha dzekutaurirana uye kutakura pakati peWestminster neLondon munguva yezana remakore rechiXNUMX nerechiXNUMX.
Chimwe chekuda kuziva kwerwizi urwu ndechekuti yakambopindwa nechando kamwe muna 1677 uye kubvira ipapo haina kuzozviita zvakare. Chikonzero cheichi ndechekuti iyo yese London Bridge yakagadzirwazve uye huwandu uye kuwanda kwepiers kwakaderera izvo zvakabvumira kuyerera kuyerera zviri nyore. Neiyi nzira, nekusakurudzira rwizi rwenzizi kuti rwuende nekukurumidza, mvura kumagumo inotonhora.
Kunobva rwizi Thames
Ngatione kuti chii sosi, mitsipa uye kudzika kweRwizi Thames. Iyo nzira yese yerwizi inosiya zano rekwainobva. Kune mataundi mazhinji anoti ndiyo nzvimbo ine rwizi rwayo kwainobva. Rwizi Thames rwunotangira mumusoro weThames uye matsime manomwe. Munguva inotonhorera yegore uye mune yakanyorovera nguva, ndiyo nguva yakakwana yekushanyira ino nzvimbo. Iyi ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa kuona rwizi ruchiyerera padyo nechikumbaridzo.
Thames rwizi fauna
Rwizi urwu haruna kungozivikanwa nekukamura England muzvikamu zviviri asi rwunozivikanwawo nemhuka dzayo. Mumakore gumi apfuura huwandu hwemhuka dzakaputsa rekodhi dzakanyorwa. Iyo nzanga yakazvipira mukutarisira uye kuchengetedza mhuka yakanyoreswa akati wandei vanopfuura zviuru zviviri zvemhuka zvekuona zviri pamutemo mumakore gumi apfuura. Mazhinji emhuka akaonekwa ari eboka rezvipuka zvemhuka zveRwizi Thames aive zvisimbiso. Zvinonzi zvakare ma dolphin nema whale anosvika makumi mashanu akawanikwa.
Aya ese manhamba anosiyana neaya emakore makumi mashanu apfuura apo paki yakaziviswa mune yekufa kwehupenyu. Kunyangwe izvo vanhu zvavanofunga nezvazvo pavanofamba kuenda kuLondon uye vachiona rwizi Thames, ivo vanochengeta huwandu hwakasiyana hwemhuka dzesango. Semuenzaniso, kune mutambo wepagore wekuverenga swans umo shiri idzi dzakanaka dzese dzinoverengerwa pamwe chete nevana vadzo uye dzinoongororwa zvakanaka nemapoka ekurapa evarapi vezvechiremba uye vesaenzi vezvirwere.
Kuvhima nekutora mazai e swans kwakarambidzwa zvachose sezvo kugoverwa kweshiri idzi kwaive kwakakosha kwazvo kune zvese zviitiko zvinoitwa nekorona munguva yeXNUMXth century. Kuwanda kweshiri idzi kwakachengetedzwa kwemakore ese anotevera setsika uye nzira yekuona kuchengetedzwa kwechirudzi ichi. Uye zvakare, ivo vanopa runako rusingaenzanisike kune ino nharaunda inoita kuti ive chimwe chinhu chakasikwa. Iko kuderedzwa kwemarudzi ndeyechokwadi kubvira makore mazana maviri apfuura iwe waigona kuona zvakapetwa huwandu hwemaswans aripo nhasi. Vavhimi vasiri pamutemo, imbwa uye kunyangwe kusvibiswa kwerwizi pacharwo kwakaderedza huwandu hwezvigaro.
Kusvibisa uye kukanganisa
Inofanira kutakurwa mupfungwa kuti rwizi rwunopfuura nepakati pemaguta makuru uye rwunokanganiswa nekusvibiswa. Yakanga iri munzvimbo yepamusoro yekusvibisa mukutambanuka kwayo kwemakiromita makumi manomwe kubva kunzvimbo yeGravesend kuenda kuTeddington kukiya kubvira sampling yakaitwa muna 1957 yakaratidza kuti hapana hove yaive nemukana wekugara mumvura idzi.
Iyo payakange isina chiyero chehutachiona, rwizi Thames yaive nzvimbo yakakwana yekuti salmon ibereke uye dzimwe hove zvakare, uye kubata hove kwaiitwa setsika. Sekukura kwakaita guta uye huwandu hwevanhu hwaikura, huwandu hwemarara hwainzi rwizi rwakawedzerawo. Yakaraswa kwemakore mazhinji, asi mushure megore ra1800 ndipo paive chaizvo apo kusvibiswa kwakava dambudziko rakakomba.
Mvura dzese dzakatanga kusvibiswa uye hadzina kurapwa. Zvese izvi zvakaburitsa kuwanda kwemabhakitiriya aipedza oxygen irimo mumvura iyo Icho chinhu chakakosha chezuva rehove uye kusimudzira kwemvura yemumvura. Kuitira kurerutsa matambudziko aya, mabasa akarongerwa kugadzirisa rwizi, achiona kukura kwemakemikari indasitiri ichiwedzera, izvo zvakaita kuti kusvibiswa kuwedzere. Iyo indasitiri yemakemikari uye gasi kambani yakarasa marara ese murwizi kana kuwedzera kusvibisa zvakanyanya.
Nhasi ichiri yakasvibiswa asi ikozvino ndiyo imwe yenzizi dzakachena kwazvo dzinoyerera dzichipinda mukati meguta. Basa rekudzorera richiri kunetsa asi mhedzisiro iri kutowanikwa.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve rwizi Thames uye hunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Geology » Rwizi rweThames